तिब्बती ल्हासा अप्सो जात पत्ता लगाउनुहोस् कुकुरहरु को विश्व
El ल्हासा एप्सो आज कुकुरको अत्यधिक प्रशंसित प्रजाति हो यसको लामो कोटको कारण सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूमा, जुन यो कुकुरले सुन्दर देखिन्छ। तर यो नयाँ कार्य भन्दा बाहिर हामी तिब्बतमा उत्पन्न भएको अति पुरानो जातको बारेमा कुरा गर्दैछौं, तिब्बती म्यास्टिफसँग मिलेर मिलेर।
ल्हासा अप्सुहरू कुकुरहरू थिए जसलाई उनीहरूको वातावरणमा सराहना गरियो र यसैले शताब्दीयौंसम्म यसको जात राखियो। यो सानो जातको कुकुर आज सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि उत्तम कुकुर हो, किनकि यसमा हंसमुख चरित्र छ र यसको परिवारसँग जोडिएको छ। तिब्बती मूलको यो जातको बारेमा बढि जान्नुहोस्.
1 ल्हासा अप्सुको इतिहास
4 ल्हासा अप्सो स्वास्थ्य
5 कुकुरको स्याहार
6 किन तपाइँसँग ल्हासा अप्सो हुनु पर्छ
ल्हासा अप्सुको इतिहास
ल्हासा अप्सो कुकुर तिब्बतमा रहेको ल्हासामा यसको उत्पत्ति भएको शहरमा यसको नाम छ। तिब्बती समाजमा कुकुरको ठूलो महत्त्व थियो र यसको उत्पत्ति सयौं वर्ष अघि ईसापूर्व भएको हो। यो सानो कुकुरमा ठूलो अभिभावक गुणहरू थिए। यद्यपि यसको आकारले असर गरेन, यो परिचितहरूको उत्तम साथी थियो तिब्बती मास्टिफ्स, जसलाई उनले आफ्नो बोक्रा अपरिचितहरूको उपस्थितिको साथ चेतावनी दिए, ती दुई बिच एक सिद्ध टीम बनाउँदै।
यस समारोहको अतिरिक्त, यो कुकुरलाई एक उत्कृष्ट उपस्थित मानिन्थ्यो, किनकि यसलाई धेरै सराहना गरियो। यस तरिकाले, धेरै महत्त्वपूर्ण आगन्तुकहरूलाई ल्हासा एप्सो कुकुरको साथ प्रस्तुत गरिएको थियो आदरको चिन्हको रूपमा। यस प्रकार कुकुर धेरै महान परिवारहरूको हिस्सा भयो। आज कुकुर अब संरक्षक कुकुर नै छैन, यद्यपि अझै पनि यी मध्ये केही यी सुविधाहरू छन्, तर प्रायः ती सबैलाई साथी कुकुरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हामीले भनेझैं, तिनीहरू आफ्नो मोटो र लामो फर को लागी सौन्दर्य प्रतियोगितामा अत्यधिक प्रशंसा गरिन्छ।
ल्हासा एप्सो सानो कुकुर होईन तर सानो होईन। को सुक्खा मा उचाई 25 सेमी र सामान्यतया5देखि7किलो वजन। यसको गुणस्तर यो छ कि यसको लामो र बाक्लो कपाल छ, जसको टाउको कम्मरले कभरिएको छ। यद्यपि यो सानो छ, यसमा पर्याप्त मजबूत र प्रतिरोधात्मक शारीरिक संरचना छ। यसको थूथो छोटो छ र यसको अभिव्यक्ति सामान्यतया मैत्री हुन्छ। यो कुकुर हो जुन प्रायः यसको अग्लो भन्दा लामो हुन्छ।
यदि केहि कुकुर बाहिर खडा भने, यो आफ्नो कपाल हो। यदि यसलाई बढ्नको लागि अनुमति दिइयो भने यो लामो लम्बाईमा पुगेको छ र अनुहारमा यो आँखामा झर्ने झर्ने छ यसले यसलाई यसको विशेषता प्रदान गर्दछ। जहाँसम्म, त्यहाँ तिनीहरू छन् जसले मर्मत सजिलो बनाउनको लागि तिनीहरूको फर छाँट्ने सहारा लिन्छन्। यस अवस्थामा कुकुरको बिल्कुल भिन्न उपस्थिति हुनेछ। को रंगको बारेमा कोट मह, बालुवा, सुन, खैरो, सेतो, कालो वा बिकोलर रंगको साथ मिसिन सकिन्छ.
Lhasa Apsoaको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ धेरै हंसमुख र जीवन्त कुकुर, जसले सम्पूर्ण परिवारको दिन अझ राम्रो बनाउन सक्दछ। ऊ धेरै आफ्नैसँग जोडिएको छ र एक संरक्षक वृत्ति छ किनकि ती वर्षहरू वाच वाचकको रूपमा छ। यो कुकुर हो कि अपरिचितहरूसँग केहि सुरक्षित गर्न सकिन्छ, कम चंचलता देखाउदै, तर यदि हामीले तिनीहरूको विश्वास कमायौं भने हामी सँधै मित्र हुनेछौं।
यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि यी प्रकारका साना साथी कुकुरहरू उनीहरूका मालिकका धेरै अनुयायीहरू हुन्, त्यसैले कुरा गर्न। तर ल्हासा अप्सो एक हो अधिक स्वतन्त्र चरित्रको साथ कुकुर, कहिले काहिं हठी, जसले आफ्नै निर्णय लिनेछ। कुनै श doubt्का बिना, उहाँसँग ठूलो गुणहरू र बौद्धिकता छ र हामी उनलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्छौं, तर सधैं धैर्यता र सकारात्मक शिक्षाको साथ।
हामी एक कुकुरको सामना गरिरहेका छौं दुबै तपाईं घरमा एक्लै हुन सक्नुहुन्छ र कम्पनीको मजा लिन सक्नुहुन्छ तपाईको बच्चाहरूलाई उनीहरूको स्थान दिन सिकाउनुपर्दछ, किनकि उनीहरूले सँधै लाड वा ध्यान दिन चाहँदैनन्। यस तरिकामा हामी एक महान कुकुरको मज्जा लिन सक्छौं।
ल्हासा अप्सो स्वास्थ्य
ल्हासा एप्सो एक कुकुर हो जुन फलामको स्वास्थ्य भएको देखाइएको छ र प्रायः सबै साना कुकुरहरू जस्तै उच्च आयु हुन्छ। जे होस्, तिनीहरूको केहि छाला समस्या हुन सक्छ। हिप डिसप्लासिया देखा पर्न सक्छ, साथ साथै मिर्गौली समस्याहरु। थप रूपमा, स्वास्थ्य समस्याहरु मध्ये एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त प्रगतिशील रेटिना एट्रोफी हो जसको साथ कुकुर अन्धा हुन्छ।
को पशु चिकित्सकमा नियमित चेक-अप तिनीहरू विशेष गरी आठ वा नौ बर्ष पछि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, जब कुकुर वरिष्ठ छ, जब कि अधिक समस्याहरू देखा पर्दछ। यसको प्रचुर र लामो कपालको कारणले, कुकुरलाई सबै प्रकारका परजीवीहरू ठेक्का दिनबाट रोक्नको लागि कीरफर्मको साथ तपाईं पागल हुनै पर्छ।
एउटा चीज जुन प्रायः चिन्ताजनक मालिकहरू हुन् जसले ल्हासा अप्सोको स्वामित्व पाउछन् तिनीहरूको फर को हेरचाह छ, जसले निश्चित रूपमा धेरै काम लिन्छ। न केवल यो बाक्लो र भरिने छ, तर कुकुरको आकारका लागि यो पनि एक ठूलो लम्बाई हो। देखाउनुहोस् कुकुरहरूले प्राय: यो धेरै लामो र सिधा कपाल लगाउँछन्, पूर्ण रूपमा हेरचाह गरियो।
कुकुरहरु को मामला मा एक छ कि बढी सक्रिय जीवन निश्चित रूप बाट कपाल काट्न सिफारिस गरिएको छ हरेक धेरै पटक। यो कुकुरलाई धेरै सहज लाग्नेछ र हामी कुकुरको कपालबाट गाँठ र ट्याang्गलहरू हटाउनेछौं। केश कुकुरलाई सहज छ कि आकार मा कपाल राख्न हरेक धेरै महीनाहरु गरिनु पर्छ। यो तरिका हामी घर मा समय समयमा यो केवल कंघी गर्न को लागी हुनेछ।
यो कुकुर एकदम सक्रिय छ, त्यस्तै तपाईंको दैनिक हिंडाईलाई आवाश्यक हुन्छ। यद्यपि यो एक महान एथलीट होईन किनकि यो अन्य जातका साथ हुन्छ, यसले मैदान, रेस र लामो पदयात्रामा आनन्द लिनेछ। तातो दिनमा सावधान हुनुपर्दछ किनभने यो समतल अनुहार भएको एक जात हो जुन उच्च तापक्रम वा अत्यधिक व्यायामको साथ दम घुट्न सक्छ।
किन तपाइँसँग ल्हासा अप्सो हुनु पर्छ
El ल्हासा आप्सो एक आदर्श साथी कुकुर हो। यो फ्ल्याट र घरहरूको लागि सही आकार हो। उहाँ स्वतन्त्र र स्मार्ट, चंचल, जीवन्त र हंसमुख हुनुहुन्छ। यदि हामीलाई त्यस्तो प्रकारको कुकुर मनपर्दछ जसलाई निरन्तर ध्यानको खाँचो पर्दैन, हामीसँग ठीक कुकुर छ। तर हामीले यो याद राख्नु पर्छ कि यो सँधै अनुशासित हुनुपर्दछ किनकि यो यस्तो दौड हो जब यो प्रस्तावमा आएर जिद्दी बन्न सक्छ। के तपाईंलाई ल्हासा अप्सो जात मन पर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुर जात » ल्हासा अप्सो